वृद्ध आरोही मीनबहादुर शेरचनको निधन, विश्व रेकर्ड सपना अधुरै
काठमाडौँ -सबैभन्दा वृद्ध उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउने लक्ष्यसहित त्यसतर्फ लागेका आरोही मीनबहादुर शेरचनको निधन भएको छ । शनिबार साँझ ५ बजेर १४ मिनेट जाँदा उनको सगरमाथा आधार शिविरमै निधन भएको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले पुष्टि गरेको छ । ‘सगरमाथा आधार शिविरमा खटिएका सरकारी सम्पर्क अधिकृतले आरोही शेरचनको निधनको पुष्टि गरेका छन्,’ एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले भने, ‘यो नेपाली आरोहण क्षेत्रका लागि अर्को दुःखद दिन हो ।’
म्याग्दी जिल्लामा जन्मिएका शेरचनले सन् १९६० (विसं. २०१६)देखि हिमाल आरोहणको यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । उक्त वर्ष शेरचन धौलागिरि हिमालमा ५ हजार ७ सय मिटरसम्म आरोहण गरी फर्किएका थिए । त्यसयता उनी थुप्रैपटक नेपालको पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण पैदल यात्रा तथा विभिन्न अभियानमा सहभागी हुँदै आएका थिए । पेसाले पूर्वगोर्खा सैनिक उनको यसपटकको सगरमाथा आरोहण अभियानको व्यवस्थापन समिट नेपाल टे«किङले गरेको थियो ।
यस वर्ष हिमाल आरोहणको पूर्वसन्ध्यामा विश्व पर्वतारोहणका दुई चर्चित आरोहीको दुःखद निधन भएको छ । शेरचनअघि १७ वैशाखमा चर्चित स्विस आरोही युली स्टेकको निधन भएको थियो । सगरमाथाको क्याम्प टु हुँदै नुप्त्से हिमाल (७८६१ मि.) आरोहण गर्ने क्रममा उनको निधन भएको हो । आरोहणका क्रममा भएका यी दुई दुःखद् घटनाले पर्वतारोहण क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको एनएमएका अध्यक्ष शेर्पाले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।